Akavaka kuzvikudza Pt. 2 — Trip LEE - YEPAMUTEMO SARUDZA
Akavaka kuzvikudza Pt. 2
Air rwaJodhani vari iconic. Handina kudzipfeka zvikuru kukura zvazvo, nekuti vabereki vangu vakaramba ini kutenga ridiculously shangu zvinodhura. Handina kufara nazvo, asi ndaiziva ndaisazobvumira kuwana maoko angu pamusoro peya. Saka ndaifanira kurarama - kuburikidza nekunyepedzera havana kurarama. Rakanga refu vaviri makore kuedza pachangu vabvume kuti reebok muchinjikwa vanodzidzisa vaiva Stylish. Asi sezvo ndakura, Ndakaziva rwaJodhani vaiva nesimba kufuratira. All shamwari dzangu vaiva peya kana mbiri, uye imwe shamwari wangu kutsutsa nechido navo.
Kana muchizvikudza idzva akabuda, haana chete kumisa maererano vomunharaunda Foot Locker apo akanga dzisingatengeswi nguva; Akavaka upenyu hwake kuwana kuti itsva peya. Akaita nechokwadi aiziva zvose Jodhani kusunungurwa mazuva, angadai kutenga shangu chete namavara akasiyana, uye kazhinji angadai kupedza Mugovera mangwanani misasa pamberi shangu zvitoro. It akaridza pfungwa dzangu. Ini saka pakupedzisira aifanira kuzvibvunza, “Chii saka chinokosha pamusoro shangu idzi?! Zvakajeka ndiri kurasikirwa nechimwe chinhu.”
shamwari yangu Kunyanya rwaJodhani akaita mashoko. Kana zvechokwadi kana kuti kwete, akanga achiti ruzha uye zvakajeka kuti shangu idzi Aikosha rearranging upenyu hwako. Rudzii mashoko anoita upenyu hwako kuti?
Chii Uri Vachiti?
In wangu okupedzisira romukova, Ini nharo kuti tinofanira kushandisa mashoko edu kuzvirumbidza muna Mwari pachinzvimbo pachedu. Zvino ndakaenda kunyange mberi, vachiti Mwari akatisika nokuda kwechikonzero ichochi. Asi handifungi kuzvitutumadza wedu anofanira kungoitirwa mashoko edu. Kwete chete tinofanira kudada Ishe nemiromo yedu, tinofanirawo kudada naye hwedu.
Zvose zvaunoita anoita mashoko nezvaMwari. kudya ose iwe udye, ose bvunzo iwe tora, ose awa iwe kushanda rinotaura chinhu nezveMusiki wako. Saka kunyange kana ukasarudza kuchengeta muromo wako akavharwa nezvake, Mararamiro ako achava nezvakawanda zvokutaura. The mubvunzo: chii chauri achiti?
Works Good Mwari Akanaka
MuMharidzo yake yakakurumbira zvikuru, Jesu anoti ichi: "Chiedza chenyu ngachivheneke pamberi pevamwe, kuitira kuti vaone mabasa enyu akanaka uye vakudze Baba venyu vari kumatenga " (Matthew 5:16).
Jesu anoudza vateereri vake kuti vararame upenyu yakajeka, azere nemabasa akanaka pamberi vamwe. Asi imi cherechedzai haatauri, "Kuitira kuti vanhu vachaona sei zvinoshamisa vaKristu." Chinangwa hakusi kubwinya kwedu, asi kuti vamwe vaizova "kupa rukudzo [yedu] Baba vari kuDenga. "Mabasa edu akanaka nguva dzose zvinoratidza Mwari wedu akanaka.
Zvifunge. Chii nezvaMwari kana tiri vanhu udyire vanoitira vamwe sengura? Zvinorevei kuti kutaura vaiona? Kwete chete haritauri kuti zvisikwa raMwari maturo, asiwo anokurukura kuti tiri Nhongonya wezvose. Kunyange zvinhu ichokwadi, uye tiri ndezvaJosephus nhema nezvaMwari vamwe.
Asi chii kana pane, takanga ndezvokuti udyire uye akaisa upenyu hwedu pasi vavakidzani vedu? Zvakadini kana isu aipa kubatsira zvinodiwa nevamwe? Rudzii mashoko anoratidza kuti nezvaMwari? It anokurukura kuti hatizi Nhongonya Universe uye kuti pane chimwe chinhu chikuru kurarama upenyu hwedu nokuda. Zvinoratidza zvakasikwa naMwari rinofanira kukosheswa, uye kuti tinoda kuda vamwe sezvo isu tanga kudiwa naye.
Chisarudzo ose mukaita chinhu mukana negirazi, kuratidza kunaka Muiti wako. Mumwe wechipiri ane mukana kuva Monitor, showcasing Snapshots yekubwinya kwake. Zvino avo vakatipoteredza kubata muchidimbu kuti zvakanaka, tinosimuka kuvaudza kuti chiedza chedu chiri mufananidzo muduku chete woutsvene kwake.
Chokwadi, kuzvikudza noupenyu hwedu uye miromo yedu anoenda ruoko muruoko. Kana isu chete pemapani noupenyu hwedu, vanhu vangafungidzira tiri chete zvakanaka vanhu. Havazosimudzirani kuziva ndiani runotigombedzera kuti tirarame upenyu hwakanaka kudaro. Uye kana mashoko edu vanoti Mwari zvinoshamisa, asi hwedu vachiti hazvitendi, edu anoti vanotanga kusavimba. Tinofanira kuita zvose.
Ko hwako kutaura zvinhu zvikuru nezvaMwari? Your akangwara bhamba chinamirwa uye nyora vechiKristu havasi kukwana. Ko chequebook they yako vanoti? Ko kubata hwako nevamwe vanoti? Ko wako pabasa vanoti? Ndinoziva kupinduka zuva nezuva kwokukundikana kuzvikudza paari sezvandinofanira. Mwari ndiye mukuru kupfuura vose, saka kana ndiri kurarama nenzira inoita kuti naYe kutarisa duku Ndiri kugara nhema.
Pane chinhu chiri muChadenga chinokosha kupfuura zvepabonde, kana basa kukwidziridzwa, kana vachipiwa rwaJodhani? Chokwadi hapana. Iva nechokwadi chokuti upenyu kunoita kuti pachena. Zvingaita sokuti sebasa basa, asi musafunganya - iwe dzakanga akaivakira.
Chymdii • Nyamavhuvhu 27, 2013 pa 1:55 pm • pindura
Izvi zvakadaro njere! Ndinokutendai zvikuru nokundiita kunzwisisa ichi…Mwari vakukomborere!
nzvimbo iyi • Nyamavhuvhu 27, 2013 pa 2:00 pm • pindura
mukuru pambiru!!! Mwari Ropafadzai iwe nemhuri yako.
patriciadorimain • Nyamavhuvhu 27, 2013 pa 2:00 pm • pindura
mazvita Ishe shoko iri
SdoubleU • Nyamavhuvhu 27, 2013 pa 5:20 pm • pindura
Another Blog huru! Mwari ari kushandisa izvi muupenyu hwangu.
ikaruma • Nyamavhuvhu 28, 2013 pa 12:48 ndiri • pindura
Taurai: Chii I Read Online – 08/28/2013 (a.m.) | izwi rokuti emeth Aletheia
KThomp • Nyamavhuvhu 27, 2013 pa 9:18 pm • pindura
nemaonero Great kwatiri 80s uye 90s vana vanoyeuka Jordan yaitonga zvakajeka. Zvinosuruvarisa, Ndichiri kuona vamwe mbudzana kuti mandiri uye nguva zhinji havazivi kusvikira pashure ndava reprioritized chete zvakakwana hwangu kuti nyangarara zvinhu. Rumbidzai Jehovha nokuda kwenyasha dzake uye nokuregererwa! Ndakafara akamhanya mhiri Blog renyu, chengeta kunyora nokuti Him.
tiffleroux • Nyamavhuvhu 27, 2013 pa 11:02 pm • pindura
Ndiri chaizvoizvo kunakidzwa nedzidziso yenyu. Zviri pachena mumwe zvipo zvenyu!
ikaruma • Nyamavhuvhu 28, 2013 pa 12:46 ndiri • pindura
Ini pum kuwana zvakakwana izvi. nzwisiso huru uye kudzidzisa Trip!!
Handisi • Nyamavhuvhu 28, 2013 pa 10:32 ndiri • pindura
ini akapa zvakawanda zvokufunga nezvazvo..
HannahWell • Nyamavhuvhu 28, 2013 pa 10:57 ndiri • pindura
Izvi zvakadaro bata. Inoita unoshamisika zvakadini raMwari chiedza zvechokwadi shinning kuburikidza hwako.
Nguva ini kuti mvura cheki uye kuongorora zvakanaka.
Mutende iwe rwendo Lee <3
Michael • Nyamavhuvhu 28, 2013 pa 11:40 ndiri • pindura
Thanks ndizvo zvandiri chaizvoizvo kunetseka, kushandisa mashoko angu kuparadzira kubwinya kwaMwari. Ndinoda kuti zviito zvangu vataure, asi izvozvo hazvina kukwana uye ndiri kuva zvikuru kuziva kuti. Tinotenda kuti ichi nokukurudzira kwandiri here kubuda imomo uye kuparadzira Shoko raKe. Ndiri chaizvoizvo kubuda kembasi wangu papera kutaura nevanhu nezvaJesu. Gotta vhaira paari!
TreverlyHillz • Nyamavhuvhu 28, 2013 pa 12:03 pm • pindura
Zvechokwadi uyu oma chaizvo nyaya. Asi chii pamusoro chiKristu zviri nyore, rudyi? Nokuomerwa ini unovapo tichirarama upenyu hwangu kuitira kuti vanhu vaone kuti ndicho chiedza chaMwari kupenya uye kwete chiedza mumwe mukomana akanaka. Mubvunzo nokuti munharaunda: Ndezvipi zvishomanana nonverbals kuti tinogona nokupinza kuitira kuti vanhu vanogona kusiyanisa hwedu kubva hwevamwe “zvakanaka & kushumira” vanhu?
Taurai: Chii Upenyu Hwako Vachiti? |
Arlicia • Nyamavhuvhu 28, 2013 pa 1:22 pm • pindura
Ndiri kungoti neromuromo naMwari serakaoma conformation nenzira Blog yako. In paradzanisa maviri pazviitiko, isu kumboda akanyora pamusoro chete zvinhu. Ndinoda rudo kugoverana zvinyorwa yangu nemi. Ini iyeni akaita Jorodhani kuenzanisa uye zvose!!!! Uyewo Matthew 5:16. Ndapota kuziva kwandakanga anogona kuudza zvinyorwa kuzvida chivimbo yangu. Ini zvirokwazvo vane basa simba peni rangu uye zviri pachena pashure pokuverenga Blog renyu!!! Thanks chokuita!!!
Renatto • Nyamavhuvhu 28, 2013 pa 1:22 pm • pindura
Great romukova! Akadenha uye kukurudzirwa.
Holly • Nyamavhuvhu 28, 2013 pa 2:37 pm • pindura
Wow- kuirovera! Thnk U, zvokubvumira R gr8 Mwari 2 shandisa U kutaura chokwadi! I LUV mashoko acho & edza yangu chakaoma 2 kurarama: 'Rega hwangu kuva uchapupu hwerudo rwenyu'. Everyday ndinonyengetera, 'Ishe, ini kushandisa nokuti kubwinya Ur nhasi '.
sleems • Nyamavhuvhu 28, 2013 pa 3:36 pm • pindura
Ngatitaurei kudada! Nokuti Jehovha.
Ndwila • Nyamavhuvhu 28, 2013 pa 7:12 pm • pindura
U Rily ar mumwe blessin vazhinji kunyanya ini!
UnhaeHan • Nyamavhuvhu 29, 2013 pa 4:33 ndiri • pindura
Ndinokutendai zvikuru nokuda kwokukurudzirwa. It zvinoita ini kuongorora bankbook rangu uye pabasa ...
Ramba wakadaro rakanaka!
Mallory • Nyamavhuvhu 29, 2013 pa 3:24 pm • pindura
Thanks ichi! kunzwisisa kwako zviri kukurudzira uye convicting. I def musapa Mwari yakamufanira nomuromo wangu sezvo ndiri inonzi kuita. Good kuona Shoko pakuti isu vanonzi kuzvirumbidza…uye kuti chinhu chakanaka!
YouthExplosionForChrist • Gunyana 1, 2013 pa 10:38 ndiri • pindura
Nzvimbo iyi zvinoshamisa ,zvinokurudzira chaizvo. Achange kugoverana mharidzo dzenyu pwere dzedu. mumhanzi Your yakatobuda akafuridzirwa pavo, kuti imwe nzira kuvapa shoko raMwari kuti ichadavirwa anogara chikomborero chakadaro. Tinokutenda akapindura chikumbiro. Mwari komborera.
Taurai: Views & Tweets: Gunyana 4, 2013
Godson • Gunyana 5, 2013 pa 11:52 ndiri • pindura
Handichakuidzii nditendere vanhu sheedzera maitiro angu, asi ini ndikunyengetererei kuti Muiti wangu, ini ambotirega kuva zvakawanda zvakafanana Muponesi wangu